Ndị njem na-agụtaghị ọnụ ọgụgụ nke State of Hawaii COVID-19
Home » Akụkọ Njem Nleta » Ndị njem na-agụtaghị ọnụ ọgụgụ nke State of Hawaii COVID-19
Nwere ike 5, 2021
A hụla Hawaii ka ọ bụrụ ihe nlere maka United States na World iji gbochie COVID-19. Enwere ike inwe olile anya na echiche a dabere na eziokwu. Gini mere ndi isi ochichi na ndi ochichi a hoputara ji etinye ihe ize ndu iji duhie ndi nleta na ndi bi na onu ogugu nke COVID?
Ndị omeiwu Hawaii sitere na Senate na Houselọ na ndị otu kọmitii na-ahụ maka ahụike na ọdachi gosipụtara: A na-ebu ụzọ gụọ ndị ọbịa na-emepe emepe COVID mana ewepụ ya mgbe e mesịrị.
Ndi Gọvanọ Hawaii Ige na Honolulu Mayor Blangiardi chọrọ izere ajụjụ a dị mkpa ka enweghị ike ịjụ ya na nnọkọ mgbasa ozi ọha na eze?
A hụla Hawaii dị ka ebe kachasị nchebe na nke amachibidoro na United States nke America n'oge ọrịa na-efe efe nke COVID-19. Kedu ka nchekwa dị na Hawaii?
eTurboNews ewepụkwala Hawaii News Online na mgbasa ozi ịhapụ ka ha jụọ ajụjụ na ogbako ogbako site na steeti Hawaii na Obodo Honolulu. Enwere ike inwe ihe kpatara ya. Ruo ọtụtụ ọnwa, eTurboNews nọ na-eche ohere ịjụ izi ezi nke nọmba COVID-19 bipụtara.
A hụla Hawaii dị ka ebe kachasị nchebe na nke amachibidoro na United States nke America n'oge ọrịa na-efe efe nke COVID-19.
Njem njem njem na njem nke Hawaii alaghachila na ndekọ ndekọ mgbe a bịara n'ụlọ obibi. International njem nleta na-anọgide na-emechi. N'ime nzukọ ezumezu nke obodo, Hawaii Tourism Authority CEO John De Fries kwuru maka ịmachi ọnụ ọgụgụ ndị njem na 35% iji kpuchido gburugburu ebe obibi na ọdịnala ndị Hawaii mgbe ndị njem ndị ọzọ nke ụwa na-agbasi mbọ ike ịbawanye ọnụọgụ.
Hawaii ka nwere iche iche ụbọchị iri maka onye ọ bụla na-abanye na ya Aloha Steeti na-enweghị ule COVID-19 akọwapụtara nke ọma site na Laboratory US akwadoro. Anabataghị ule ọsọ ọsọ. Ihe mkpuchi a chọrọ site na ụlọ ọrụ akwadoro ka ahapụ ya na nnwale na-adịghị mma.
Gini mere State nke Hawaii ga eji duhie ndi ya na ndi njem nleta na izochi ezi onu ogugu nke COVID-19? Otu nọọsụ chọrọ ka a ghara ịkpọ aha ya gwara ya eTurboNews ọfịs nlekọta nlekọta ya ngwa ngwa na-anabata ndị ọbịa nlele COVID-19 dị mma oge niile.
eTurboNews rutere na Ngalaba Ahụ Ike nke Hawaii, iilọ Ọrụ Na-ahụ Maka Njem na njem nlegharị anya nke Hawaii, na ndị omebe iwu bụ ndị so na Senate na Kọmitii Houselọ na Ahụike na Committeelọ Kọmitii na Preparedic & DIsaster Preparedness.
Amaghị ajụjụ a dị oke mkpa ma dị mkpa banyere etu njem nlegharị anya dị na Hawaii si dị mma, yana otu ndị bi na nchekwa si emekọrịta ihe na ndị ọbịa, enwere ike ịkọwa ha dịka ndị na-eleghara anya.
Senator Sharon Moriwaki mere nyocha ọzọ wee pụta mkpebi ikpeazụ.
A na-agụ ndị ọbịa na Hawaii oge a chọpụtara na ha bụ COVID-19 nke ọma. Ozugbo a nyochachara ya, onye ọbịa a nwere ikikere ọkwọ ụgbọ ala na steeti ọzọ, a ga-ehichapụ ya na ọnụ ọgụgụ Hawaii ma gbakwunye na ọnụ ọgụgụ na steeti ma ọ bụ obodo ya.
N'ikwu ya n'ụzọ ọzọ, o yiri ka ọ na-agbakwụnye ma na-ewepu oge na ọnụ ọgụgụ COVID-19 na Hawaii, na-ezochi ọnụ ọgụgụ ndị ọbịa na ndị bi na ya. Wayzọ a, a na-eme ka e nwee mmetụta nke nchekwa na nchekwa dabere na mgbagwoju anya.
A hụwo Hawaii ka ọ bụrụ ihe nlere maka United States na ụwa iji jigide COVID-19. Enwere ike inwe olile anya na echiche a dabere na eziokwu. Eziokwu ahụ bụ na ọrịa COVID-19 maka ndị bi na Hawaii dị ala ma ọ naghị arịwanye elu. Eziokwu ahụ bụkwa na ọtụtụ ndị bi na Hawaii agbanyela ọgwụ mgbochi ma ọ bụ na-enwe usoro ịgba ọgwụ mgbochi. Ya mere, gịnị kpatara ndị isi ga - eji were ihe ọghọm duhie ndị ọbịa na ndị bi na ọnụ ọgụgụ COVID?
Gee ntị na oku ekwentị. Ikpeazụ oku na-ekpughe ya niile: